Forum serasera malagasy EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA - Dinika forum.serasera.org
EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA
Fitohizan'ny hafatra : EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA
RBNIR - 25/07/2018 16:46
Fantatrao v fa efa antomotra ilay andro hamalian'Andriamanitra ny olona?
« Efa antomotra ny andro lehiben'i Jehovah; Eny, efa antomotra sady mihafaingana indrindra,
Injay! feon'ny andron'i Jehovah! Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. » (Zefania 1:14)
« Andro fahatezerana izany andro izany, Andro fahoriana sy fahalahelovana, Andro fandravana sy fanafoanana, Andro maizina sy manjombona, Andro mandrahona sy maizim-pito. » (Zefania 1:15)
« Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, Hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. » (Zefania 1:16)
« Ary hampahory ny olona Aho, Handehanany toy ny jamba, Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy; Ny ràny dia haidina toy ny vovoka, Ary ny nofony ho toy ny zezika. » (Zefania 1:17)
« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. [*Na: mahatsiravina] » (Zefania 1:18)
Vakio tsara: and.14 "Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any"....Lehilahy mahery : ireo lehilahy matanjaka aza dia "hitomany mafy" amin'izany andro izany.....
Raha ireo lehilahy mahery ireo aza hitomany mafy, maika v ka isika olon-tsotra???
Tsy hoe ho faly akory Andriamanitra fa ho tezitra hoy ireo teny ireo...ary fahoriana no hiandry ny zanak'olombelona fa tsy ho fifaliana akory.....
Samia mandinika.....samia mieritreritra....hoy ny teny ao amin'ny andininy faha 17 hoe "Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy"......
Mimima - 25/07/2018 17:35
Tena marina izany...anefa mbola tsy ampy ny asa fitoriana ny filazantsara ary mbola tena miandry ahy sy ianao.tsy eto an drenivohitra ihany akory fa misy ny toerana maro zai mbola tsy mahalala na dia "Jesosy" korina arany.
endriny - 04/08/2018 11:35
Dia faly ery izany ilay Atra mampahory ny olona amin’ny andro farany.
rhaj0 - 05/08/2018 16:27
Io indray i RBNIR politisiana (kristiana) kanosa: manao resaka matavy manjavozavo. ILay baiboly no ahofahofan-dry RBNIR, fa ny coco-ny tsy miasa dia milaza marina hoe, "rahoviana marina" izy izany ao, fa mody hoe "antomotra antomotra".
Efa noresahina tato io ry RBNIR aa.. ary hozy ny poltitsiana fa TSY kanosa toa an'i RBNIR, fa hoe
endriny - 09/08/2018 17:13
Mba vonjeo ry zareo fa amidin'ny olona ny entana a
rhaj0 - 10/08/2018 00:49
ny ao @ provansin'i Quebec, fiangonana 1 isaka ny 10 andro koa no amidy..
Tsy poisson d'avril ity fa tena izy
Dimanche, 1 avril 2018 14:26
MISE à JOUR Dimanche, 1 avril 2018 14:28
Avec la diminution de la fréquentation des lieux de culte du Québec, on estime que plus de 450 églises ont fermé leurs portes entre 2003 et 2016.
hi hi hi.. mitsangam-bolo ao am-pasany ao mihitnsy angamba i Jesosy.. T@ nivarotra AO ANATIN'NY tranon'ny Ray ny olona, tezitra be ilery, izao ilay tranon'ny Ray miihintsy no amidy.
ka rehefa tsy hitahy kosany Izy, maninona no tsy mifoha hiady vomanga
endriny - 11/08/2018 10:12
Atakalon-dry zareo vola ny tranon'Atra izany. Asa marina izay ho afitsok'i Jesosy mahita an'ireny?
joshrah698 - 11/08/2018 19:40
Marina mihitsy zany!
Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika ka samy manao izay fara-heriny mba hisariana olona maro... , sanatria lasa fifaninana ve???.
rhaj0 - 14/08/2018 03:06
joshrah698 Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika
- Ka tena sitrapon'izao Andrmntra izao mihintsy ve izany, na hoe tso-dranoNY,
- sa tena tsisy idiran'izao Andrmntra izao mihintsy izany rehetra izany
endriny - 16/08/2018 17:10
Tsy hoe fifaninana akory, fa fidiram-bola mahomby sy tsy dia manasatra firy kanefa mahasarika maro ny harato.
Ireto ondry koa moa donendrina be dia izay mahay misioka tsara ihany no arahiny.
Raha manarak tsara isika dia ry zareo efa samy ao anatin'ny vala kristianina ihany no mifampisarika eo.
endriny - 22/08/2018 06:36
Ianao ve tsy mahatsapa fa lalam-piainana izany. Ireo olona mpanao baolina taloha, mihazakazaka ohatran'ny soavaly, izao mitomany vao tafaka any ambony rihany, fa marary daholo ny lamosina sy lohalika
Ary rehefa ireo no mitranga dia hifarana ny andron'ilay olona.
rekinbelo - 13/09/2018 08:17
Efa porofo mitohaka io famarotana eglizy io e, tena efa akaiky tokoa ny farany, mbola famarotana aza no hitantsika izao fa aiza rehefa tonga ny fandravana ny atao hoe fivavahana rehetra eto an-tany???
Ny hany azo atao sady mbola fotoana izao dia ny mitady an'i Jehovah sy fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy izany hoe minoa an'i Jesosy izany intsony no ilaina izao
rhaj0 - 15/09/2018 02:33
rekinbelo Efa porofo mitohaka io famarotana eglizy io e, tena efa akaiky tokoa ny farany, mbola famarotana aza no hitantsika izao fa aiza rehefa tonga ny fandravana ny atao hoe fivavahana rehetra eto an-tany???
Dia toa ny ao @ Kristianisma (ihany) izany no, rehefa mivoatra, dia miharatsy... raha ny fahitanao azy ry REkinbelo.
Rehefa mivoatra araky ny taona nefa ny teknolozia ohatra, ohatra hoe tomobila (404, lasa 4x4), na iphone, dia mihatsara hatrany.
Sa fivoarana any @ tsaratsara kokoa kosany ilay "famarotana leglizy"??
Dia nefany koa ho'a Jesosy ilay tezitra be rehefa mivarotra entana tao @ Leglizy ny olona. Izao ho'a namidin'ny olona h@ Leglizy.. ka efa TSY "tranon'Andmntra" intsony izany fa efa lafo ee... tsisy atao mampatezitra intsony
andrainamichel1 - 15/09/2018 05:30
Message: Uninitialized string offset: 1092
« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. [
rhaj0 - 15/09/2018 16:51
andrainamichel1 « Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany.
Ameo Iphone x na Samsung Galaxy Note 9 i Jehovah dia TSY ho tezitezi-poana sy TSY mba ho io tsy mahay miaina toa io intsony eee...
prime - 28/09/2018 14:43
rhaj0 Ameo Iphone x na Samsung Galaxy Note 9 i Jehovah dia TSY ho tezitezi-poana sy TSY mba ho io tsy mahay miaina toa io intsony eee...
Hajaiko tanteraka ny tsy finoanao an'i Jehovah Ray Andriamanitra sy ny tsy fitiavanao an'i Kristy Jesosy sy ny mpanaradia Azy... tsy maninona izany satria safidinao... fa miangavy aho no sady mananatra, na dia noho ny fahendrena maha-Malagasy fotsiny aza hoe : aza maniratsira an'Andriamanitra, toy ny zava-poana azo anaovana kivazivazy Izy sy izay voalazan'ny baiboly... rehefa tsy itovianao hevitra dia lazao fotsiny ny tsy finoanao Azy... mbola fitiavana no ilazana izany aminao...
Ekeko ny hoe tofoka angamba ianao amin'ny voalazan'ny baiboly... hajaiko izany, satria tsy fantatro ny antony mahatonga anao hanana fihevitra toy izany... raha tsy tianao ny filazanay mitonona ho kristiana, dia teneno mafy izahay, teneno ratsy mihitsy noho Ilay Andriamanitra inoanay fa aza Jesosy no anaovana kisangisangy fa tsy mora hany anie ny hiseho amin'izany andro izany, voasoratra ho avy amin'ny andro ihavian'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra...
prime - 28/09/2018 14:48
Hono hoy aho rekinbelo, iza moa Jehovah dia inona ilay ataonao hoe fanjakan'Andriamanitra? fa somary tsy maharaka kely ny tianao ambara aho, nefa avy eo ianao miteny hoe tsy ilaina intsony ny hoe minoa an'i Jesosy??? (misaotra mitondra fanampim-panazavana)
rhaj0 - 29/09/2018 05:44
prime aza maniratsira an'Andriamanitra, toy ny zava-poana azo anaovana kivazivazy Izy sy izay voalazan'ny baiboly...
Io indray ry Prime efa resaka efa ela teto aa...
Bien sûr qu'on peut se moquer des religions
zany no position ofisialin'ny ao @ provansin'i Kebek, Kanada.
Nampian'ilay PM hoe (jereo eto):
"La liberté d'expression consiste à pouvoir dire des choses multiples, y compris les choses les plus étranges et même parfois révoltantes, tant qu'on ne franchit pas une ligne que la société doit marquer... La liberté d'expression comprend le droit de dire des niaiseries, qu'on doit par la suite critiquer et dénoncer (...) Mais où est la ligne ? Il n'y a pas de liberté dans la société sans ligne. Est-ce que l'appel à la violence, par contre, doit être toléré ? Voilà la question qu'on pose."
hi hi hi... ny fahazoako azy...
- La liberté d'expression comprend le droit de dire des niaiseries ---> religion = niaiseries
- qu'on doit par la suite critiquer et dénoncer
Mino aho fa ny any Eoropa any koa, dia efa "normal" izany... taloha sy taorian'ireny Charlie ireny...
... fa io izany tsy zakan'ny tsenan'i Prime.. ka dia ao ianao izany ee...